नेपाली पासपोर्ट विश्वका खराव पासपोर्टहरुमा एक ! – Halkhabar kura
२ माघ २०७७, शुक्रबार ११:०६
नेपाली पासपोर्ट विश्वका खराव पासपोर्टहरुमा एक !
हेन्ली पासपोर्ट ईन्डेक्सले फ्रि–भिसा र अन अराईभल भिसाको आधारमा सूची तयार गरेकोमा नेपालको पासपोर्टले जम्मा ३८ देशमा मात्र फ्रि–भिसा र अन अराईभल भिसा पाउन सक्ने व्यवस्था जनाएको छ ।
नेपालसँगै लिवियासमेत समान अंकका साथ १०४ औं स्थानमै छ । गत वर्ष पनि नेपालको पासपोर्ट विश्वकै खराब पासपोर्टको सूचीको सातौँ नंम्बरमै थियो ।
हेन्ली पासपोर्ट ईन्डेक्सले विभिन्न देशले जारी गर्ने पासपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई व्यवस्था विभागको जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा विश्वव्यापी मुलुकहरुको हैसियत मापन गर्न यो सूची तयार पार्ने गरेको छ ।
त्यसो त सूचीमा नेपालभन्दा पनि पछि ७ बटा मुलुकहरु छन् । जसमा प्यालेस्टाईन, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान, सिरिया, इरान र अफगानिस्थान रहेका छन् । अफगानिस्थान विश्वकै सबैभन्दा खराब पासपोर्टको सुचीमा नम्बर १ मा छ ।
र अफगानिस्थानी पासपोर्टले मात्र २६ मुलुकमा मात्र फ्रि–भिसा र अन अराईभल भिसा पाउछ ।
यो सूचीको शीर्ष स्थानमा जापान र दास्रो स्थानमा सिङ्गापुर रहेको छ । दुबै देशका पासपोर्टले १९० वटा देशमा अन दी अराइभल भिसा पाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै तेस्रो स्थानमा दक्षिण कोरीया र जर्मनी, चौथो स्थानमा इटाली, फिनल्याण्ड, स्पेन र लेक्जम्बर्ग रहेका छन् । ती देशहरुले पनि १९० हाराहारी मुलुकहरुमा सजिलै अन दी अराइभल भिसा प्राप्त गर्ने छन् ।
Previous ३ दिनमा ३ प्रकारको रिपोर्ट, रिपोर्ट फेर्दै पैसा असुुल्दै यो अस्पताल ! (भिडियोसहित)
Next सत्ताको हतारोमा प्रचण्ड-नेपाल, सरकारमा साझेदारी गर्न काँग्रेसलाई ओलीको प्रस्ताव (भिडियोसहित)